War-Saxaafadeed Madaxwayne Trump oo ka hadlay dilki sargaalki Iran sulaymani – Somali Mail
Home WARARKA Somali News War-Saxaafadeed Madaxwayne Trump oo ka hadlay dilki sargaalki Iran sulaymani
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu u dilay hogaamiyihii sare ee milateriga Iiraan, Qaasim Sulaymaani, si “uu u joojiyo dagaal, ee uusan doonayn inuu mid bilaabo”.
Waxa uu sheegay in uu “dhammaaday waqtigii argaxa ee Sulaymaani” kaddib markii Jimcihii lagu dilay weerrar dhanka cirka ah oo ka dhacay garoonka diyaaradaha Baqdaad ee dalka Ciraaq.
Sulaymaani ayaa madax ka ahaa howgallada Iiraan ee Bariga Dhexe oo waxa uu hogaamin jiray ciidammada Qudus. Iiraan ayaa waxa ay wacad ku martay in “si adag uga aargoosan doonto” kuwii ka dambeeyay geeridiisa.
Pentagon-ka ayaa xaqiijiyay in ciidammada Mareykanku ay dileen Janaraal Sulaymaan
Safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ayaa weerrarka kaddib muwaadiniinta Mareykanka ku boorrisay iney ”sida ugu dhakhsiyaha badan uga baxaan dalka Ciraaq”.
Israa’iil ayaa iyana la shegeyaa iney milaterigeeda heegan galisay.
Hogaamiyihii sare ee milateriga Iiraan, Qaasim Sulaymaani, ayaa waxaa lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo Jimcihii ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad.
Holaca ka baxaya burburkii uu ka tagay weerrarkii ka dhacay bannaanka hore ee garoonka diyaaradaha ee Baqdaad
Previous article Maraykan oo dilay sargaal ka tirsan IRAN faahfaahin
Dowladda Mareykanka ayaa fulisay weerar dhaawac xooggan gaarsiiyey Iran, ayada hoggaamiyih…